iHelp shanduro yechipiri - Man Down System - Yese Yese Mushandi Yevashandi Kugadziriswa Kwemagetsi | OMG Solutions
Chigadzirwa Inoratidzwa Munharaunda Nhau
Kune vashandi vanoshanda munzvimbo dzine njodzi dzakadai sekuvaka, zviwanikwa, hutano hwehutano, kumanikidza kana kufambisa, Aware 360 ​​inopa zvizere kuchengetedzeka kwevashandi kuti ave nechokwadi chekuti mushandi wese anogona kuwana rubatsiro kana rubatsiro rwekurapa pazvinenge zvichanyanya kudikanwa. Tichishandisa satellite (GPS) zvishandiso, mapurogiramu eApple uye anonakidzwa isu tinoona kuti tekinoroji yakakodzera inoisirwa mamiriro ega ega akasiyana.
Yakanakira kuisa-pa / Nyore & Inoshanda (4 Ruvara)
Webhu & nhare dzeSoftware dzekutarisa (Nhoroondo nzira / chaiyo-nguva)
Webhu & Smartphone APP yekuteedzera Mapuratifomu ichapihwa. Unogona kutarisa kuti iripi nzvimbo yako yemushandisirwo (wenhoroondo nzira / chaiyo-nguva) uchishandisa PC yako, Hwendefa kana Smartphone.
zvose Kwete-Kubatsira hurumende vamwe dzidzo
3895 Total Views 2 Views Nhasi